Hotel caalami ah oo lagu eedeeyay inuu faafiyay sawirka haweeney qaawan. — FAAFIYE.COM
Haweeney ka soo jeedda gobolka, Chicago ee dalka Maraykanka ayaa maxkammad la tiigsanaysa shirkadda hoteellada caalamka ee Hilton, waxayn dalbanaysaa in magdhow ahaan loo siiyo lacag gaareays boqol milyan oo dollar, waxayna arrintaasi sabab uga dhigtay in si qarsoodi ah muuqaal looga duubay iyadoo qubaysanaysa, waxaana muuqaalladaas lagu faafiyay bogag badan oo galmada looga hadlo.
Waxay arrintan ogaatay bishii sagaalaad ee sanadkan, saddex sano kaddib markaas oo loo soo diray email iyadoo lagu wargelinayo “qofkan ma adigaa?” waxaa kale oo warbixinta ku qoran in lala wadaagay lifaaq bog toos u geynaya halkaas oo magaceeda oo dhammeystiran lagu qoray.
[penci_blockquote style=”style-1″ align=”none” author=””]“Aad ayaan uga taxadarnaa badqabka martida hoteelkeenna deggan” waxaa sidaas yiri afhayeen u hadlay hoteelka Hilton.[/penci_blockquote]
“Eedeymahan waan la yaabay waana ka argagaxay .” ayuu afhayeenka hotelka yiri.
“Badqabka iyo ammaanka martideenna ayaa ah mudnaanteenna ugu sarreysa, mana aqbali karno in lagu xadgudbo xuquuqda u gaarka ah shakhsiga” ayaa warbixinta shirkadda hoteellada lagu sheegay.
Bloody rivalry erupts between al-Shabaab, group in Somalia.
Wiil 7 jir ah oo $22 milyan ka sameeya Youtube-ka.
Gabadh somaliyeed oo maraykan ah oo Dharka Xijaabka Xayeysiisa.